काला मकारेला, मेनोर्कामा सबैभन्दा सुन्दर समुद्र तटहरू मध्ये एक यात्रा समाचार
लुइस मार्टिनो | 21/03/2021 15:30 | मेनोर्का, समुद्र तटहरू
काला मकारेला यसकै सबैभन्दा सुन्दर तटहरू मध्ये एक हो मेनोर्का टापु। दक्षिण पश्चिम भाग मा अवस्थित, सुन्दर शहर को धेरै नजिक गढीयस टापुको पूर्व राजधानी, प्रत्येक वर्ष यसले हजारौं पर्यटकहरू प्राप्त गर्दछ जुन यसमा फोटोग्राफ लिन चाहान्छन्।
मानौं कि यो चूनढुंगाका पर्खाल र लगभग कुमारीले फ्रेम गरेको यस सानो कोभको अपील पर्याप्त थिएन, यसको छेउमा तपाईंसँग छ Cala Macarelleta, अझ सानो आयामको र नग्नवादको अभ्यासको लागि आदर्श हो। यदि तपाईं काला म्याकेरेलाको बारेमा बढी जान्न चाहनुहुन्छ भने हामी तपाईंलाई पढ्न जारी राख्नको लागि प्रोत्साहित गर्दछौं।
1 Cala Macarella कस्तो छ?
1.1 भूमिगत गुफाहरू
2 Cala Macarella कसरी पुग्ने
3 Cala Macarella को वरपर
3.2 ला नवेटा देस ट्यूडन्स
Cala Macarella कस्तो छ?
Cala Macarella को सम्बन्धमा हामीले तपाईलाई देखाउनु पर्ने पहिलो कुरा यो हो कि यो साँच्चिकै idillic पक्ष हो। यसको सेता बालुवा र नीलो पानीको नीलो पानीले तपाईंलाई आकर्षित गर्नेछ। यो सुरक्षित गरिएको सुरक्षित स्थान पनि हो ठोस चट्टानको सानो पहाड, जसरी हामीले तपाईलाई भनेका थियौं कि ती गठन भएका छन् गुफाहरु जुन, प्राचीन समयदेखि नै सप्ताहन्तमा बिताउन शरणको रूपमा प्रयोग भइरहेको छ।
यो पूर्वकाल भाग मा, तपाईं एक पातदार छ पाइन वन जुन समुद्र तटमा नै पुग्छ र एक रोचक परिदृश्य टिब्बा। टाढाको स्थानको बावजुद, गर्मीमा समुद्री किनार भीडभाड हुन्छ। त्यहाँ धेरै कम यात्रीहरू छन् जो मेनोर्का टापुको भ्रमण गर्दैनन्। सबैजना चाहन्छन्, कम्तिमा पनि, उनी समक्ष यस्तो राम्रो ठाउँमा फोटो खिच्नको लागि।
थप रूपमा, योसँग पर्याप्त ठूलो बिच बार छ जहाँ तपाईं समुद्र तटमा फर्कनु अघि खान सक्नुहुन्छ। यी सबैका लागि, सायद यो उत्तम हुनेछ यदि तपाईं मा क्याला म्याकेरेला जानुभयो भने वसन्त oa प्रारम्भिक पतन अधिक शान्ति संग यसको मजा लिन।
यो सुन्दर कोवमा पनि धेरै प्रभावशाली अन्डरवाटर गुफाहरू छन् जुन तपाई अभ्यास गर्नुहुँदा भेट्न सक्नुहुन्छ स्नोर्कल। तिनीहरूलाई फेला पार्न तपाईं बलौटे क्षेत्रबाट बायाँको चट्टानको छेउमा पौडनु पर्छ। एक सय पचास मिटरमा, तपाईं यी गुफाहरू भेट्टाउनुहुनेछ। तिनीहरू प्रकृतिको फल हुन् कार्ट ढु stone्गा जुन किनारको पर्खालहरू बनाउँदछ जुन समुद्र किनारमा फ्रेम गर्दछ र समुद्री सतहभन्दा माथि पनि छ, जसो हामीले अघिल्लो वर्णन गर्यौं।
यद्यपि, काला म्याकेरेलाको समुद्री सतहहरू खासै आकर्षक छैनन्। तिनीहरू बलुवा हुन् र वनस्पति र ज fa्गली जनावरहरूमा धेरै धनी छैनन्। तपाईले खास प्रकारको शैवाल, केहि स्टारफिस र स्पन्जहरू देख्नुहुनेछ र भाग्यको थोरै भागमा, तलपट्टिमा बालुवामा टेपाकुलो (एक्लै जस्तो समान माछा) शिविरमा राख्नुहुनेछ।
Cala Macarella कसरी पुग्ने
यस सानो समुद्रतटको अर्को ठूलो आकर्षण त्यहाँ पुग्ने मार्गको साथ गर्नुपर्दछ। तपाईं यो सडकमा गर्न सक्नुहुनेछ, तर हामी त्यसबारे कुरा गरिरहेको छैनौं, तर एउटा सुन्दर पैदल यात्रा मार्गको बारेमा: क्यामे डे क्याभल्स.
मेनोर्काको सम्पूर्ण टापुको चारै तिरको मार्ग यो नामले मध्य युगदेखि नै जानिन्छ, जब राजा Jaime II उनले समुद्री डाकूहरूको आक्रमणबाट यस टापुको रक्षा गर्न मेनोर्कालाई एउटा घोडा राख्न बाध्य पारिदिएको कानून जारी गरे।
हाल, यो सुन्दर मार्ग, जुन तपाईंलाई प्रस्ताव गर्दछ अद्भुत परिदृश्य, पुनर्स्थापित हुन्छ र चरणहरूमा विभाजित हुन्छ। ती मध्ये एक, एक हो कि एक लोभ टर्क्वेटा र गाल्दाना, Cala Macarella को माध्यम बाट जान्छ। ज breath्गल र बेंसीहरूमार्फत एक घण्टा पैदल यात्रा पछि तपाईं सास फेर्ने दृश्यहरू प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, तपाईं म्याकेरेलामा आईपुग्नुहुनेछ। थोरै पहिले, यदि तपाईं दायाँ फर्कनुभयो भने, तपाईं पनि Cala Macarelleta भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ।
काला म्याकेरेलाको नजिक क्यामे डे क्याभल्स
अर्को तर्फ, किनकि तपाईंले क्यामे डी क्याभल्स लिनुभएको छ र यदि तपाईंले आफैंलाई बलको साथ पाउनुभयो भने, तपाईं यसलाई निम्नमा अनुसरण गर्न सक्नुहुनेछ। काला गलदाना, मेनोर्कन प्रकृतिको अर्को आश्चर्य, धेरै दृश्यहरू पार गर्दै जुन तपाईंलाई अतुलनीय परिदृश्य प्रस्ताव गर्दछ।
यद्यपि हामीले भनेजस्तै तपाईले म्याकारेला पनि पुग्न सक्नुहुन्छ राजमार्ग। यस समुद्री तटमा बाट बसहरू छन् गढी। तर, यदि तपाईं यसलाई आफ्नै कारमा गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाईंले जानु पर्ने सडक पनि लिनु पर्छ दक्षिणी तटहरूदिशामा सेन्ट जोन मास। डाइभर्ट पछि काला टर्क्वेटातपाईं कार पार्कमा आइपुग्नुहुनेछ, जुन भुक्तानी गरिएको छ र म्याकेरेलाबाट १ about मिनेट पैदल छ।
Cala Macarella को वरपर
यस समुद्री तटमा तपाईंको भ्रमणको लागि उत्तम पूरक शहर हो गढीकुनै पक्कै पनि मेनोर्काको सबैभन्दा ऐतिहासिक। कुनै चीजको लागि होईन, यो १ capital१1714 सम्म यसको राजधानी थियो, जब अ English्ग्रेजीले यसलाई कब्जा गरे। अब राजधानी छ महुन, तर महान स्मारकहरू सिउदादेलामा छन्।
शहरको सबैभन्दा सुन्दर चीज यसको हो पुरानो सहर, अजीब नामको साथ साँघुरो सडक द्वारा गठन (उदाहरणका लागि, «Que no pasa») र जुन कन्भर्ज सान्ता मारियाको क्याथेड्रल। यो १ beautiful औं शताब्दीमा बनाइएको सुन्दर क्याटालिन गोथिक शैलीको भवन हो आत्माहरूको चैपल, बारोकको क्याननहरूको अनुसरण गरेर अठारौंमा बनेको हो।
सिउदाडेलाको ऐतिहासिक केन्द्रमा तपाईसँग रूचिको अन्य पोइन्टहरू छन्। उदाहरण को लागी, जन्म वर्ग, जहाँ तपाईं एक ओबेलिस्क देख्नुहुनेछ जुन १mi1558 मा एडमिरल पियाले आज्ञा गरेको टर्की जहाजहरू विरुद्धको विजयको सम्झना गर्दछ। तपाईं पनि भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ सान अगस्टनको कन्भेन्ट, १th औं शताब्दीदेखि भित्र जुन तपाईं एक रोचक diocesan संग्रहालय पाउनुहुनेछ। यो, धार्मिक सुनारको अलावा, पुर्खाहरूको टुक्रा छ talayotic संस्कृतिमा विकसित भयो बेलारिक टापुहरू कांस्य र फलाम युगहरूमा।
स्यूदाडेलाको अर्को आकर्षक बिन्दु हो पोर्टो, जहाँ तपाईं उत्सुक घटना देख्न सक्नुहुन्छ रिसागा। केहि वायुमण्डलीय अवस्थामा, समुद्र उठ्छ र खस्छ जबसम्म यो ओभरफ्लो हुँदैन। जहाजहरू समुद्री आक्रमणको आवाजमा कसरी सर्ने भनेर तपाईं प्रभावित हुनुहुनेछ।
Promenade ले तपाईंलाई लिन्छ सैन निकोलसको महल, १ enemy औं शताब्दीमा निर्मित शत्रुको आक्रमणबाट शहर बचाउन। र Ciudadela sol el का अन्य रोचक भवनहरु Torresaura को महल, जसले लेभेन्टाइन गोथिक र लाई जवाफ दिन्छ टाउन हॉलपुरानो किल्लामा निर्मित।
ला नवेटा देस ट्यूडन्स
अर्को तर्फ, सियुडेलाबाट महुन जानको सडकमा, तपाईंले यो अन्त्येष्टि निर्माण पाउनुहुनेछ जुन निश्चित रूपमा सम्बन्धित छ टालायोटिक संस्कृति हामीले के कुरा गरेका छौं। यसले यसको माथिल्लो भागमा ढु stone्गा हराइरहेको छ। र, यदि हामीले पौराणिक कथामा ध्यान दिनुपर्दछ, यसको एउटा उत्सुक विवरण छ।
दुई जना राक्षस एउटी केटीको प्रेमको खोजीमा थिए। ती मध्ये कुन चाहिं उनीसँग विवाह गर्न योग्य छ भन्ने निर्णय गर्न एक जनाले पानी नपाउन्जेलसम्म खनेको प्रतिज्ञा गर्यो, जबकि अर्कोले ढु ship्गाको जहाज बनाए। जब पछिल्लो व्यक्तिले यसको निर्माण कार्य समाप्त गर्न अन्तिम लिइरहेको थियो, उसले सुने कि उसले पानी कसरी भेट्यो कि उसले कसरी कराए। त्यसपछि, पहिलो, पराजित र क्रोधित, प्वालको खाडलमा पुग्ने ढु stone्गा फ्याँकियो र त्यसले आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीलाई मार्यो। यो देखेर डराएर ऊ भाग्यो र ती दुवैले आफ्नी छोरीलाई विवाह गरेन।
अन्तमा, Cala Macarella यो भित्रको सबैभन्दा सुन्दर तट हो मेनोर्का दुबै यसको सेता बालुवा र नीलो पानी र नीलो पानीको लागि र यसको भव्य वातावरणको लागि। अगाडि बढ्नुहोस् र यसलाई हेर्नुहोस्। तपाईं पछुताउनु हुँदैन।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » स्पेन शहरहरू » मेनोर्का » Cala Macarella